Mashruucii Biyo Fidinta Xunboweyne Ee Fashilmay Xaguu Ku Danbeeyey?Lacagta La Lunsaday Ayaa Ka Badan $165million Dollar – somalilandtoday.com
New Roman”;”> ( EU ) ayaa 2012 kii inoogu deeqay $64 Million doolar si loogu horemariyo 9 mashruuc oo mashruuca ugu balaadhnaa uu ahaa $8.5 Million dollar loona qoondeeyey biyo balaadhinta iyo horumarinta biyaha Caasimada Hargeisa
11- Baanka Horumarinta Africa oo loo soo gaabiyo ( AFDB) ayaa isna biyo gelinta JSL ku bixiyey lacag dhan $ 8.5 Million dollar. Total ka lacagtaas kor ku taxan ayaa noqonaysa $165 Million oo Dollar taas oo loo qoondeeyey in ay soo af jarto lacagtaasi Qorshe hawleedyadii horumarinta biyaha Somaliland ee 5-ta sanadood (2012-2016 ) Waxaana Mashaariicdan mar kasta laga fuudhyeelaayey dib u habeynta iyo fidinta biyaha Caasimada Hargeisa iyo nawaaxigeeda oo ilaa iyo maanta biyo la’aan badani ka jirto taa soo ay shacabka reer Hargeisa is weydiinayaa meesha ay martay lacagtaa Malaayinka Dollar ka ahi iyo cidii lunsatay?
1- Kut’e mashruuca 1aad ee magaciisa la yidhaa (HUWSUP ) waxay EU ku maalgelisay lacag dhan $15 million Euro ah. Waxaa sanduuqa horumarinta ee SDF isna mashruucan ku maalgelisay lacag dhan $11 million dollar waxaana mashruucaa fulintiisa loo xil saartay markii la kala shakiyey hayada UN Habitat waxaana shaqada mashruucaa si aan loo musuqmaasuqin dusha ka ilaalinaaya Shirkad Jarmal ah oo la yidhaa (FITCHNER ) hadaba shacabka reer Somaliland waxay is weydiinayaa meesha uu mashruucani ku danbeeyey ? Mise wuxuu isna noqday aan ka fuudee alow fiihaa … !!
2- Lay’e mashuuca 2aad oo isna Hargeisa Gudaheeda ka socda waxaa lacag gaadhaysa 23,500,000 Million oo Euro ku bixiyey Banka Horumarinta Dawlada Jarmalka waxaana shaqada mashuruucan gancanta ku haya shirkad Jarmal oo la yidhaahdo CES? Hadaba su’aashu waxay tahay xaguu marayaa mashruucaasi? oo isna mudadiisii dhaafay ? Goorma ayaa Hargeysi biyo ka helaysaa ?
3- Kuy’e Shirkada Coca Cola international waxay iyana ku deeqday biyo balaadhinta lacag dhan $5 Million oo dollar waxaana ay gacanta u gelisay shirkad Talyaani ah oo la yidhaa TS shirkadaa oo magaalada dhexdeeda kawada taangiyo dhaadheer? ilaa iyo maanta ummadda uma cada meesha ay howshaasi marayso iyo goobta iyo goorta ay biyo ka heli doonaan reer Hargeysa.
A) in Ceelasha la qodo. B) In baraagaha la qodo oo beebabka la dhigo. Waxaa markiiba fashilmay wejigii kowaad ee ahaa in Ceelasha la qodo. Hadaba su’aashu waxay tahay yaa loo raacayaa oo loo soo qabtay mashuuracan baaxada leh ee fashilmay? ma Khawaajigii Al-Axbaabi ayaa laga dabo tegayaa oo loo maxkamadeynayaa? Mise xaalku wuxuu ahaa qaado aan qaatee !!